4 nke July Party Ideas maka ihe ndozi, Nri na ọchị - Ulo
Tụlee Epic gị nke Eprel nke ọnwa anọ nke emere atụmatụ, site na ndozi ruo na menu
Consider Your Epic 4th July Party Planned
N'oge ọkọchị na-aga n'ihu n'ihu, anyị nwere ike * n'ikpeazụ * ịkpọkọta ndị enyi anyị na ndị ezinụlọ anyị. Ọ baghị uru ikwu, anyị na-aga n’elu na nke ọzọ maka afọ nke anọ nke ọnwa anọ nke ọnwa a. Site na DIY crafts ka ịhụ mba n'anya na-atọ ụtọ sizinal menu , Anyị nwere 30 echiche ga-cha cha ọ bụla na onye ọ bụla n'ime gị ọbịa.
Njikọ: 35 Low-Mmezi Summer Dinner Party Ideas
Otu esi achọ mma
1. Patriotic Burlap Pụrụ Iche
Ma ị dogidere ya na ngere n'ihu ụlọ gị ma ọ bụ n'azụ ụlọ egwu gị, ọrụ a nke Mee N'onwe Gị ga-enye gị aka ịmịiko. Igodo nke iji kpọgide anya na-eji stencil na teepu iji mee ka kpakpando ndị na-ese na ọnya ahụ dị mma.
2. Easy Mee N'onwe Gị Patriotic Isiokwu Centerpieces
Nsogbu bụ na ị nwere ihe niile ịchọrọ iji mee ihe ịchọ mma ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ obere tebụl edozi maka ndị ọbịa gị iri nri, tinye otu n'etiti nke ọ bụla. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eri nri na otu nnukwu tebụl, tụlee ịmalite site na ite sara mbara ma jupụta ya na mpempe akwụkwọ anụ ahụ na pinwheels ọzọ.
3. 4thbọchị anọ nke July
Ozugbo chi jiri, a mason ite masterpieces ga-emekwa gị dum yad enwuru ọkụ. Jiri citronella tii na ha iji mee ka anwụnta pụọ ​​mgbe gị na ndị ọbịa bịara igwu ala arụrụ n'ụlọ s’mores .
Obodo Chic Cottage / Angie Holden
4. Summer Burlap Isiokwu agba ọsọ
Nye maara na ahia ole na ole nwere ike ime ihe a niile? Ee, ị ga-agbaji igwe ịkwa akwa gị, mana nke a bụ ihe dị jụụ karịa ịzụrụ uwe mgbochi, akwa tebụl plastik site na ụlọ ahịa ahụ. Jiri ngwakọta uhie, ọcha na acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ gaa ememme niile na mbipụta ọkọlọtọ.
Activmụaka Ihe Blog
5. Patriotic Akwụkwọ Windsocks
Kpọgidere ihe ndozi a dị mfe nghọta n’osisi dị n’ogige gị, n’akụkụ ọnụ ụzọ ámá ya na ahịhịa ma ọ bụ gburugburu oche gị — n’ebe ọ bụla ndị iyi ahụ ga-enweta ikuku. Kpọkọta onwe gị, wee hapụ ụmụaka gị ka ha jiri akara mmado mara mma nke nwere ụdị kpakpando.
6. Ribbon, Mkpịsị na Fabric Scrap Flag
Button stars + lace scraps + pom-pom fringe = ọkọlọtọ mara mma-ma-ọmarịcha ọkọlọtọ America nke anyị hụtụrụla. Ihe oru a bu uzo di nma iji kpochapu ndi oru aka gi na akwa, denim ma obu rickrack.
Soro na-acha uhie uhie na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ na-agba ọsọ ma ọ bụ na-edebe ya n'ụzọ doro anya na iji mbipụta ọkọlọtọ dị iche iche. Dabere n'otú iwu si anọ ọdụ na oge ezumike gị, ị nwekwara ike ide aha onye ọbịa ọ bụla na coaster, yabụ ha na-amụba okpukpu abụọ dị ka kaadị ebe. Anyị kwuru na ha bụ asacha efere mma?
8. Abali anọ nke Julaị Wreath
Echefula frilly yiri mgbaaka nke ọkọlọtọ rịbọn na e ji esiji ákwà faux okooko osisi. Ihe a rọketị toro bụ nke a na-eme ka ememme n’emeghị elu. I nwedịrị ike ịnwale ụdị tubes kaadiboodu dị iche iche (dị ka akwụkwọ mposi ma ọ bụ nke fọdụrụ site na mpịakọta nke vinyl ma ọ bụ rịbọn), yabụ akwa nwere ike ịtọ ọtụtụ ọkụ.
Houselọ E Wuru
9. untingchụ nta Balloon
You nwere ike ịkụ ụra na-ahụ n'anya n'ihi na ị na-ehi ụra. Mana olee otu ihe uto nke a si juputa na balloon? Rịọ ụmụ gị ka ha nyere gị aka ịfụ bọọlụ ndị ahụ, wee were ndị na-ekechi ha na akwụkwọ ogologo akwụkwọ ahụ.
10. Nnukwu Akwụkwọ Flower American Flag
Ọ bụ naanị azụ maka ihe niile grill mains, festive desserts na mara mma tableware. Gịnị ka ọ bụ? Iji Silhouette Cameo ma ọ bụ Cricut igbutu ifuru ifuru (o gha echekwa gi a nke gi oge, na petals ga-agbanwe agbanwe na nha).
Ihe a ga-eri
1. acha uhie uhie, White na Blue Sangria
Ihe mbụ: Anụghị anụ oriri zuru ezu na-enweghị ume ọhụrụ mmanya . Ngwakọta a nke mmanya na-egbu maramara, brandi na mkpụrụ osisi ọhụrụ ga-emecha oriri ahụ n'ụzọ ziri ezi. Jiri akara kuki nke yiri kpakpando maka Granny Smith apụl icho mma.
2. Firecracker Berry Margarita sere n’elu
Abụọ okpomọkụ dị mkpa, otu fizzy, creamy libation. Ọ na-acha kpakpando nke bluuberi margarita, strawberry margarita na vanilla-aki oyibo ude. Ọ bụrụ na naanị na ọ bụghị sway gị, olee otú ndị mara mma bụ ọbara ọbara-acha ọcha-na-acha anụnụ anụnụ mkpụrụ skewer?!
3. Achịcha Osisi-Feta Skewers Grịl
Bịa n'oge okpomọkụ, anyị ga-atụba ihe ọ bụla na imi ihe- anyụ gụnyere. Ọmarịcha cha na-eme ka mkpụrụ osisi dị ụtọ dị ụtọ na ụtọ anwụrụ ọkụ, ebe feta na-enye nnu nnu na agụụ . (Oh, ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka cubing anyụ )
4. Esi Mac-na-Chiiz ata aru
Mgbe ooey-gooey mac na-atọ Chineke ụtọ ọgịrịga , brisket na ihe ọ bụla Anụ Mmịkpọ isi n'okpuru anyanwụ, ọ na-atọkwa mara mma m achọ ịma mma niile site na ya onwe ya. Mgbe a na-esi ya n’ime muffin, ọ na-aghọ ihe a na-ebugharị nke dị mfe iripịa mgbe ọ na-agba ọsọ na mbara ezi.
5. Nri-nwayọ-Ejiri Ezi
Ka anyị chee ya ihu: Enweghị ụzọ ị na-anabata a Abali anọ nke July mgbede enweghị Ndị ohi na nkịta (ọbụlagodi na ọ kachasị ha naanị maka ndị na-eri nri). Ma nke a Okpokoro ite-ite na-ekwe nkwa na-ezu ohi show, ekele ya ndụdụ-obi ụtọ udidi na-atọ ụtọ-na-savory ekpomeekpo. Debe ya ma chefuo ya n’abalị ahụ tupu oriri ahụ.
Jerrelle Guy / Rodney's Scott's World of BBQ
6. Achịcha Mmanụ Mmanụ Mmanu Rodney Scott
Erimeri mmiri kwesiri inwe otu nkwanye ugwu dika ehi na anụ ezi mgbe ọ na-abịa a cookout, na a mfe-ma-akpali akpali Ntụziaka bụ ihe akaebe. Uzo iji mezuo anwuru nke azu bu na-etinye ya na mpempe akwukwo a na-emeghe na imi ihe, karia igbachi ya. Were eriri gị, azụ, azụ ọbara ọbara ma ọ bụ branzino.
Dị ka ndị burgers na nkịta, ụfọdụ n'akụkụ dị nnọọ mkpa. (Anyị na-ekwu maka coleslaw, salad nduku, ọka na bekee, agwa agwa na inine eghe.) Mana were okwu anyị maka ya: Salad a dị oke egwu ga-abụ nnukwu nnukwu egwuregwu dị ka ndị ochie. Ndị ọbịa gị agaghị enwe ike ikpebi ma ha ga-ahụ anwụrụ ọkụ na-ese anwụrụ ọkụ piich , tangy halloumi ma ọ bụ toast pine nuts ọtụtụ.
8. Achịcha ọka na-atọ ụtọ ma na-ekpo ekpo
Hot, akwụkwọ-mkpa Fresno chiles. Obi ebere, achicha ọka achicha. Onye na-emesapụ aka nke mmanụ a honeyụ. Yup, ụtọ nrọ na-mere ndị a. Gbapụta ya na oven n'oge mmanya ma ọ kwesịrị ịdị njikere site n'oge ị na-eri nri abalị. (Oh, anyị ga-enwe obi ụtọ ịghara ịkọwa mmanụ a honeyụ na mmanụ a onụ tupu ị rie.)
9. Mini Mason ite Apple Pies
N'etiti ihe dị mkpa morezọkwa na gbapuo ice , ị ga-nyochawa ya nwere ike ọ gaghị achọ ihe mgbakwunye ọzọ… mana gịnị kpatara na ọ bụghị? A sị ka e kwuwe, ọ dịghị otu onye ọbịa ga-eche na inwe apụl dị obere ụkwụ ha niile. Gbaa mbọ hụ na inwere ọtụtụ vanilla ice ude n'elu oche.
10. Nke anọ nke July Ice Cream achicha
Ka ọ dị, ọkọlọtọ ụlọ ahịa na-agwụ ike achicha . Nhọrọ a bụ ngụkọta cinch iji mee ma na-etu ọnụ maka kitsch kwesịrị ekwesị na-enweghị ọka. Ọ bụ ihe dị mfe dị ka layering raspber sorbet, vanilla ice cream na blueberry ice cream in a springform pan, na-eme ka oyi na frosting n'èzí.
1. Nwee Mmemme Nri Na-eri Nkịta
Dị nnọọ ka ha na-eme na Coney Island. Ọ na-enye ndị toro eto ohere ịbanye na ntụrụndụ na-enweghị atụ ebe ụmụaka pere mpe na-ele ndị mụrụ ha anya. Ebe ọ bụ na a nkịta dị ọkụ iri asọmpi iri nri nwere ike iburu ụmụaka nsogbu gị na kọkọkọ, setịpụ asọmpi iri nri maka ha. Naanị jupụta paịlị achịcha zụrụ ahịa na pudding chocolate na ude pịa, wee hapụ ha ka ha gwuo ihu-nke mbụ.
2. tufuo Ọsọ egwuregwu Cornhole
N'ihi na egwuregwu dị n'azụ ụlọ kachasị mma bụ ndị ị nwere ike igwu na biya oyi na aka. Soro gi na pia aka tupu gi egosiputa agwa. Onye mmeri meriri ikike ị na-etu ọnụ na-enweghị njedebe, ebe onye emeruru ahụ na-agbaga n'ụlọ ahịa mmanya na-abawanye maka ice.
Zụta ya ($ 190)
3. Ọrụ na Patriotic Crafts na Manis
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị na ezinụlọ gị n’afọ a, jupụta n’ụyọkọ nke ọtụtụ ọrụ ụmụaka ga-ahụ n’anya. Malite site n'ịgbalị aka gị na ole na ole acha ọbara ọbara-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ manicures (ị nwedịrị ike ịhapụ ụmụaka agba nke gi mbọ na nloghachi… dị nnọọ ijide n'aka na-etinye ọtụtụ nza akwụkwọ akụkọ mbụ). Mgbe ahụ, kpoo onye ọ bụla nwere ihu agba ihu, dị ka ugo nkwọcha, ọkọlọtọ America ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Kwe ka ụmụaka ahụ nọrọ na ọgba aghara site na ịhapụ ha ka ha chepụta t-shirts nke aka ha (anyị hụrụ nkuzi a n'anya site na Mama m na-achọ ), wee nwee oge ịse foto gị na onye ọ bụla wee gakwuru ndị hụrụ mba n'anya.
4. Jiri ahịhịa nzu jiri mma chọọ ahịhịa ahụ mma
Ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla ụmụaka hụrụ n'anya na-eme, ọ na-eme ọgbaghara. Site na ịwụcha nzu, ha nwere ike mepụta ka obi ha nwee obi n’achọghị ịsachachaa ha. Anyị hụrụ nke a n'anya ịhụ mba n'anya si n'aka ndị nyocha nke na-eme ka ha see ihe ọ bụla site na bọmbụ bọmbụ na-arụ ọrụ ọkụ na ahịhịa, ụzọ ụzọ, ụgbọala ma ọ bụ windo. Agba ahụ ga - ada ada n’otu izu, mana ị nwere ike ịgba ya mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịsacha ya ngwa ngwa.
Zụta ya ($ 22)
Foto Yobab / Getty
5. Nwee Parade
Nye ụmụaka niile iwu (gụọ: nne na nna ha) weta igwe kwụ otu ebe na skuuta ha maka ngosipụta agbata obi. Debe ihe eji eme ihe dika akwukwo eji acha, teepu, ihe nnochi, ndi ozo na ndi na ehichapu ahihia ka ha nwee ike icho ugbo ha. Nye onye ọ bụla sonyere gị obere ọkọlọtọ America ka ọ tinye okpu agha ha ma ọ bụ nkata igwe kwụ otu ebe, wee mee ngagharị gburugburu ebe obibi ahụ ka obodo ahụ. Nwere ike anyị na-atụ aro obi jụrụ oyi mgbe e mesịrị na a nnukwu ite nke lemọned ?
6. Nabata Ubi Ubi Ezin’ulo
Yup, anyị na-ekwu agbụrụ agbụrụ nduku, akwa akwa, nsogbu agha-ị kpọrọ ya. Kewaa onye ọ bụla n'ime ìgwè ma debe ihe ogologo ụbọchị niile na ọrụ dị iche iche. Na njedebe, nye ndị meriri mmeri na-acha uhie uhie na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ, akpa goody ịhụ mba n'anya ma ọ bụ bọtịnụ akpa, nke abụọ na nke atọ nke ha nwere ike ịkwanye maka ezumike ahụ.
7. Na-eme ihe ngosi n’azụ onyinye onyinye
Ọ bụrụ na nnọkọ oriri na nkwari gị niile toro eto, gaa n’ihu ma kpọọ ya karaoke night. Ọ bụrụ na enwere ụmụaka nọ, nye ha ọrụ ọ bụla na abụ, ịgba egwu, ime anwansi, ọchị, usoro karate ma ọ bụ ihe ọ bụla ha chọrọ ịrụ. Debe akwa uwe na obere mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa tebụl maka ebe a na-eme ememme; ị nwedịrị ike ịtọlite ​​ezigbo igwe okwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Mgbe ahụ, gbanye egwu ahụ ma mee ka ngosi ahụ malite. Isi ego maka inye nkwado na ejiji.
Ihe ngosi Marilyn Nieves / Getty Images
8. Nabata US Night Trivia
Ha aghaghi ituchapu uzo tupu ha alaghachi na klasi, nri? Ju ajuju umuaka ajuju banyere ajuju, juo ha nke ndi America kwuru ruturu ama ma obu ka ha mejuputara onwe ha ebe ha no. Debe ya nke oma na ihe uto site na nkpuru oma, dika nkpuchi ugo ncha ma obu mkpuchi.
9. Ekiri ihe nkiri n'okpuru kpakpando
O yikarịrị ka ọ dị ogologo oge kemgbe ị nọ na ihe nkiri nkiri. Mana ọ dịghị mkpa ịhapụ mpaghara nkasi obi gị naanị ile obere mkpịsị aka. Debe ihe ngosi n’azụ ụlọ gị, setịpụ ụyọkọ oche na akwa mkpuchi wee hapụ mmadụ niile gbakọta maka marathon nkiri dị anya. Pụrụ ọbụna ime ka ụfọdụ fancy popcorn (ma ọ bụ a na-egbu egbu acha ọbara ọbara-acha ọcha-na-acha anụnụ anụnụ Chex mix ) ka onye obula gbue ihu mgbe ha na-ele.
10. Mgbapụta N’ogige
Naanị ihe dị mma karịa ịkwụsị mgbede na ezimezi oku? Agaghị agwụsị mgbede ma ọlị, n'ezie. Mee ka nnọkọ ahụ gaa n’ihu ’ruo ụtụtụ site na ịtọ ụlọikwuu ma soro ezinụlọ gị nwee ihi ụra na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ụyọkọ ndị ọbịa na-agbadana ịnọ, gwa ha ka ha weta ụlọikwuu nke ha na akpa ihi ụra ka ohere wee dịrị onye ọ bụla. Tupu izipu ndị ọbịa gị ụlọ, kesaa brunch ọnụ n'ime ma ọ bụ al fresco.
Njikọ: 50 Kpamkpam Icheta 50th Birthday Party echiche
ndepụta nke kacha mma Hollywood ihunanya fim
ihunanya fim depụta bekee
meghaa ka ị ghara imeju afọ n'ụlọ
toner kacha mma maka mmanu mmanu akpụkpọ
ka ida abụba mmega
ndepụta nke ihe nkiri dị afọ iri na ụma nke 2017
fim kacha mma nke ụmụaka